BETPAS423 FATİH TERİM'DEN TAKIM TOPLANTISI! - RESTBET501.COM GİRİŞ
BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI!
November 30, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 11
Coronavirus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလျင်အမြန်ပြသနေသည်။ Covid 19 ကြောင့်အားကစား၊ အနုပညာ၊ ပညာရေးစသည့်လှုပ်ရှားမှုများစွာရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ ကလပ်များသည်ဤဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။
coronavirus အပြင်အမျိုးသားအသင်းမှပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောကစားသမားများနှင့်နည်းပြများကနည်းပြကိုနည်းပြတစ် ဦး ကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ပေးသည်။ Galatasaray နည်းပြ Fatih Terim ဒီအခက်အခဲကြုံခဲ့ရတဲ့နည်းပြတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။
Katiherispor အတွက်ပြင်ဆင်မှုများဆက်လက်ပြုလုပ်စဉ် Fatih Terim သည်သူ၏ကစားသမားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါဝေါဟာရကို၎င်း၏ကစားသမားမှဆွဲဆောင် “ကျနော်တို့ကလယ်ပြင်၌ဖြစ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲလျှင်, သူကစားသူကိုအရေးမထားဘူး။ နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာသည်အဖြစ်ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကြီးမားတဲ့ကစားသမားကို set up ဒါကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီမိတျဆှေကွာဟမှုကိုပိတ်လျှင်, အောင်မြင်မှုလာ” စကားပြောခဲ့သည်။
ပွဲစဉ်တိုင်းကိုအရေးအကြီးဆုံးစမ်းသပ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်သူ Fatih Terim ကသူသည် Kayserispor ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးသူ့လက်ထောက်များကိုအကောင်းဆုံးကစားနိုင်သည့် ၁၁ ယောက်နှင့်တိုင်ပင်ခဲ့သည်။ မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သောအစည်းအဝေးတွင်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများအနက်မှတစ်ခုမှာလူငယ်များအသင်းကိုမနှောက်ယှက်ဘဲပါဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူငယ်များသည်တစ်ပတ်တာလေ့ကျင့်ခန်းတွင်အလေးချိန်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။
BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! RESTBET501 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! BETBOO214 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! SULTANBET561 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! SUPERBAHİS630 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! SULTANBET568 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! RESTBET501 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI! BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’
11 Comments on BETPAS423 FATİH TERİM’DEN TAKIM TOPLANTISI!
MEHMET NURİ December 2, 2020 at 8:10 am
HARUN December 3, 2020 at 11:40 pm
IŞIL December 6, 2020 at 7:30 am
ÖMER December 7, 2020 at 3:00 am
HÜSEYİN CAHİT December 7, 2020 at 7:20 pm
MERVE SETENAY December 8, 2020 at 8:50 pm
UMUR December 9, 2020 at 4:00 am
SAADET NİLAY December 10, 2020 at 5:50 pm
EMRE December 10, 2020 at 10:50 pm
restbet casino sağlam bahis seçenekleri sağlayan hızlı site ile kazanabilirsiniz.
ALAADDİN December 11, 2020 at 5:00 pm
EMİNE December 12, 2020 at 11:50 pm